संसारकै १०० जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा 'सपना' ! - Shikhar Post Shikhar Post
संसारकै १०० जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा ‘सपना’ !
आर्यघाटमा अरु शवको दाहसंस्कार गर्दा मलामी र आफन्त हुन्छन् । सपनाले दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ सुनसान हुन्छ । एकै दिनमा छ वटासम्म शवको दाहसंस्कार गरेको उनी बताउँछिन् । अभिभावकको इच्छाअनुसार पढाइलाई निरन्तरतासँगै सडकमा बेवारिसे मानिसको सेवा गर्ने सपनाको योजना छ । rss
प्रकाशित मिति : बुधबार, १० मंसिर २०७७ ११:१४